Ahoana no mamantatra fivavia- Herpes
ianao eto: Home Tips Ny ady amin'ny fivavia- Herpes
Ny ady amin'ny fivavia- Herpes
Fivavia- Herpes - tsy mampidi-doza, fa Tokony hoentina
Ny iray amin'ireo tena fahita venereal aretina dia fivavia- Herpes. Na izany aza, ny aretina dia heverina fepetra azo antoka, satria tsy mitarika ho amin'ny fahafatesana, Tsy mandika ny asan 'ny vatana, ary tena zara raha mampahasaro tsy fiterahana. Na izany aza, na dia teo aza ny tsy fisian'ny mafy vokany, Herpes mamonjy matanjaka ara-tsosialy sy ara-tsaina mahazo aina, noho izany fitsaboana ny fivavia- Herpes dia mandany marary rehetra.
Activators dia Herpes virosy toy ny 1 sy 2. Amin'ny tanteraka misy ny herpesvirus 200, fa tsy hanahirana, izy ireo dia antsoina hoe Herpes simplex, otrik'aretina. Rehefa aretina, ny virosy karazana 2 fanehoana ny soritr'aretina kokoa nanambara ny.
Fitsaboana ny fivavia- Herpes mandany ny 15% tanora, be taona aretina mitranga matetika kokoa. Aretina miseho amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo isan'andro ary rehefa. Fivavia- Herpes mahazatra kokoa amin'ny vehivavy, fa tandindonin-doza ihany koa dia ahitana olona amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana, olona sy ny lehilahy miray amin'ny lehilahy mainty hoditra.
Soritr'aretina sy ny fitsaboana ny Herpes
Soritr'aretin'ny fivavia- Herpes amin'ny lehilahy sy ny vehivavy dia nihena ho maimaika, mangidihidy ary nandoro fahatsapana ao amin'ny faritra amin'ny teta, pananahana. Raha ny maimaika niseho tao The anus sy ny fitombenako, dia midika hoe, ny aretina dia niondrana an ny vatana amin'ny alalan'ny lava-pitombenana. Mety hahazo ny fahatsapana alahelo sy ny fahafahana mahatsapa, kely tazo. Toy ny aretina rashes hivadika ho kely mangarahara ka manjary miboiboika, izay taty aoriana triatra ka mandao fery. Na izany aza, ireo fery mandeha tsy misy soritry.
Indray andro, indray mandeha eo amin'ny tena, Herpes otrik'aretina dia tsy handao azy mandrakizay, Noho izany, ny tena fitsaboana dia nihena ho hanamaivana soritr'aretina sy hisorohana ny lavo indray. Fomba iray dia mitohy Prem antivirals, amin 'izany fampihenana ny mety matetika lavo. Ny fomba faharoa ahafahana mandray nahakivy Herpes immunomodulatory mpiasa - raha ny hery fanefitra dia miasa tsara, ny tsimokaretina tsy afaka ny ho tena ela. Mba hampihenana ny soritr'aretina koa ny mampihatra loha amin'ny rijan-.
Araka ny hitanareo, fisorohana ny fivavia- Herpes dia tena zava-dehibe, raha tsy te-handany ny fiainany rehetra ao amin'ny tolona amin'ny lavo. Mba hiarovan-tena amin'ny Herpes, dia tsy maintsy manaraka ny fomba fijery eo amin'ny firaisana ara-nofo tony fihetsika, voalanjalanja misakafo, maka otrikaina, araka ny tokony ho ary avy hatrany vao mipongatra mitsabo aretina.